Ihe nkiri 4 gbasara ọdachi ndị na-emere onwe ha | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe nkiri 4 banyere ọdachi ndị na-emere onwe ha
Dị ka ha na-ekwu, eziokwu na-akarị akụkọ ifo. Na ụwa nke sinima, e nwere ọtụtụ ihe nkiri na-kwuru okwu banyere ọdachi ndị na-emere onwe ha na ihe omuma banyere ihu igwe.
Ọ bụ ụdị nke sinima na ọha na eze na-amasị a otutu ruru ka ihe ngosi di egwu ọ bụ ezie na dịka m kwuru na mbụ, eziokwu na-adịkarị dị egwu ma na-emebi ihe.
Nke a bụ ihe nkiri n'ime nnukwu mmiri ozuzo na-achọ ibibi steeti Oklahoma dum. Ọrụ oke ifufe na-achụ Ọ dị mkpa na fim ahụ ebe ọ bụ na ha ga-ahụ maka izere ọdachi dị otú ahụ. Ihe nkiri ahụ zuru oke mbibi na ike nke mmiri ozuzo kwuru, na-eme ka onye na-ekiri ya nwee mmetụta dị ukwuu.
Ọ bụ apocalyptic ihe nkiri nke na-egosi otu oke oke ifufe na-efe ụwa niile na afọ ọhụrụ ice. N'agbanyeghị ịbụ ihe nkiri, ọtụtụ kwenyere na n'oge ụfọdụ nke a ga-ejedebe n'ihi mmetụta na-emebi ihe nke mgbanwe ihu igwe uwa niile
Ihe nkiri a na-anwa ịbịaru eziokwu nso ebe ọ bụ na ọ dabere na Mayan kalenda amụma. N'ime amụma ndị a ekwuru na na 2012 ụwa dum ga-ata ahụhụ ọtụtụ ọdachi ndị na-emere onwe ha nke ahụ ga-eme ka mbibi ya. Agbanyeghị na amụma ndị a emezubeghị afọ ojuju, akụkọ gbasara ihu igwe kachasị ọhụrụ na-egosi mmụba na Ihe gbasara ihu igwe n'ihi okpomoku zuru uwa nke uwa a na-enwe ugbu a.
N'oge a, akụkọ ifo na-amanye anyị iche n'echiche ugwu mgbawa na-agbawa n'ime obodo Los Angeles. Ga-enwe ike ịhụ ọnwu na-esi na ya pụta mgbawa ma were ihe ga - eme ma ọ bụrụ na eme n'eziokwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe nkiri 4 banyere ọdachi ndị na-emere onwe ha
Kedu ebe kachasị mma n'ụwa?
Mmalite nke okpomoku zuru uwa